Andro: 15 mey 2020
Hatao ahoana ny fandaharam-potoanan'ny Bus sy Metro, Ankaray ary EGO ao Ankara mandritra ny famerenana 4 andro?
Ao anatin'ny sakana misy ny fepetra tokony horaisina manoloana ny valan'aretina coronavirus (Covid-19), ny fampiharana ny fantsom-pianarana dia hotanterahina amin'ny 16-19 Mey 2020, araka ny fanapahan-kevitry ny Governemanta Ankara an'ny Governemanta Nasionaly momba ny fahasalamam-bahoaka, tamin'ny daty 13.05.2020 ary isa 2020/34. [More ...]
Hizotra rahampitso ny Bandırma Ferry
Tamin'ny tsingerintaona faha-19 tamin'ny 101 May, ny dijan'i Atatürk avy any Istanbul mankany Samsun miaraka amin'ny Bandırma Ferry dia haverina ao amin'ny Internet. Bandırma Ferry, izay hiainga ao Istanbul ny 16 mey amin'ny hetsika "Route de the Century", ny talata 19 mey. [More ...]
90% amin'ny Altınordu Intercity Bus Terminal Nifarana
Mandeha ny asa amin'ny fananganana famatsiana, izay no farany faritry ny toby fiantsonana Altınordu Intercity, naorin'ny kaominina Ordu Metropolitan any amin'ny distrikan'i Altınordu, eo amin'ny faritra 3 177 m2 eo akaikin'ny lalana peratra. 22.000 totalin'ny faritra terminal [More ...]
Fandraisana ho fanamboarana trano ho an'ny fanjaitra Natoyolu Metro Line
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia hampifandray ny distrikan'i Mamak, izay any amin'ny ilany atsinanan'ny renivohitra, amin'ny zotra ANKARAY mihazakazaka eo anelanelan'ny Ankara Intercity Terminal Operation (AŞTİ) sy Dikimevi. Dikimevi-Natoyolu Light Rail System System (HRS) vitan'ny tetik'asa “Fampiharana [More ...]
Kayseri Metropolitan Miasa amin'ny fitaterana salama
Kayseri Metropolitan Munisipaly dia manimba ny taxi ara-barotra ary koa ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny fitaterana salama. Ny famonoana taxi-be eo amin'ny 800 eo ho eo ao Kayseri no tarihin'ireo ekipan'ny Kaominin'i Metropolitan. Kayseri [More ...]
Ny fandresen-dahatra Istanbul any amin'ny fiaran-dalamby nasionaly
Miara-miasa am-pitiavana andro aman'alina amin'ny fiaran-dalamby an-trano, ny TÜVASAŞ dia roa herinandro monja amin'ny 29 Mey nomen'ny minisitra Mustafa Varank. Lamasinina herinaratra nasionaly a [More ...]
Serivisy fanadiovana ny taxi-varotra sy ny minibus varotra ao Konya
Konya Metropolitan Munisipaly dia manao disin-drongony ireo taxi-varotra sy ireo valan-javaboary ao anatin'ny faritry ny fepetra noraisina manoloana ny fipoahana vaovao coronavirus (Kovid-19). Kovid-19 tsy tapaka amin'ny bus and trams manomboka amin'ny andro voalohany amin'ny fivoahana [More ...]
Ny fiara fitaterana ao Kocaeli Manarona rongony 2 tapitrisa isam-bolana
Ny Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny FitateranaPark dia manome aina sy milamina ary amin'ny serivisy fitaterana ara-potoana ho an'ny mpandeha an'arivony isan'andro ao anaty bus. Nandeha 1 tapitrisa kilometatra tao anatin'ny kaomina ny kaominina Metropolitan nandritra ny 2 volana nandritra ny ady natao tamin'ny coronavirus [More ...]
Ny curfew, nampahafantarina anelanelan'ny valan'aretina Covid-19 dia ho ampiharina koa amin'ny 16 ka hatramin'ny 19 Mey. Raha nijanona tao an-tranony nandritra ny 4 andro ny mponina tao Istanbul taorian'ny faran'ny làlam-pandehanana, IMN maro ny vondron'olona IMM [More ...]
Tsy azo atao ny fanodinana fiaramanidina amina fiaramanidina ESHOT sy IZULAS ho an'ny fahasalamana
Izmir Metropolitan Munisipaly dia nandray fanapahan-kevitra lehibe mifanaraka amin'ny fangatahan'ny Komitin'ny siansa ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana. Mba tsy hanamafisana ny valanaretina coronavirus, izay misy fihenam-pandeha miadana dia tsy hiodina vetivety ny fiara fitaterana. Izmir Metropolitan [More ...]
MÜSİAD dia nanakodia ny sandriny mba hamindra ny famokarana taorian'ny fivoahana
Nosakanan'izao tontolo izao ny bokotra mba hamerenana indray ny kodiarana. Hanolotra modely vaovao i Tiorkia amin'ity fizahana ity: fananganana famokarana mitokana. Ny voalohany amin'ireo fototry napetraky ny fenitra MÜSİAD dia hisokatra amin'ny Tekirdağ amin'ny 15 jona. Varavarana fototra [More ...]
Ny minisiteran'ny fotodrafitrasa ao Okraina no nizara ny sehatra fanombohana ny fitaterana sy ny mpandeha mpandeha
Ny minisiteran'ny fotodrafitrasa ao Okraina dia nizara antsipirihany momba ny drafitra dingana telo novolavolaina ho an'ny famerenana ny fitaterana sy ny mpandeha mpandeha. "Ny fifamoivoizana dia hiala amin'ny dingana mandeha mihemotra," hoy ny minisitra Vladislav Krikliy. Mba hamaritana ny daty nomanin'ny dingana isaky ny faran'ny herinandro, [More ...]
Rafitra fampitandremana mialoha sy fanaraha-maso ny fiarovan-tena amin'ny fiaramanidina fiarovana (HERIKKS)
HERIKKS, novolavolain'ny ASELSAN, dia manambatra ny fampahalalana azo avy amin'ny radara fiarovana fiaramanidina ary mamorona sary an-habakabaka tena izy ary manome alalana tena ilaina amin'ny fitaovam-piadiana mety indrindra amin'ny algorithm Threat Assessment sy Weapon Allocation. System, [More ...]
Nisy dokam-barotra iray navoakan'ny Tale jeneralin'ny Forestry. Tao anatin'ilay fanambarana navoaka teo ambanin'ny lohateny hoe «Ministeran'ny Fambolena sy ny Ala, Tale Jeneraly Voahitra ny Ala, 2020 nanao fanambaràna nividy mpiasa», farafaharatsiny, ireo mpiadina diplaoma amin'ny ambaratonga ambony. [More ...]
Mitohy ny asa ho an'ny MR an-trano voalohany
Filohan'ny indostrian'ny fiarovana ny filoham-pirenena. Dr. Examinsmail Demir dia nandinika ny fitaovana MR an-trano voalohany izay novolavolain'i ASELSAN sy Bilkent UMRAM. Nanao fanambarana momba ny fandraisana anjaran'ny indostria fiarovana amin'ny sehatry ny fahasalamana, hoy i Demir, "ASELSAN [More ...]
Manomboka ny fitsapana biby ho an'ny Covid-19 Antiserum
"Hyperimmunserum momba ny fitsaboana amin'ny fanoherana ny COVID-19", tohanan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Ala, fiaraha-miasa amin'ny Direction Etlik Veterinary Control Central Research Institute (Etlik VKMAEM) ary ny Direction Générale an'ny fahasalaman'ny Public Health an'ny Ministeran'ny fahasalamana. [More ...]
Hanohy ny lalany ny indostria miaraka amin'ny dingana matoky
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nanantitrantitra fa hitandrina ny famokarana mandritra ny toe-javatra rehetra sy ny toe-javatra ary nilaza izy ireo hoe: "Hametraka politika izay hampitombo ny herintsika mifaninana hatrany isika. Hitohy amin'ny fahatokisana ny indostrianay. ” hoy izy. [More ...]
Fandidiana ny fahadiovana amin'ny fikambananan'ny heloka bevava voarindra!
Amin'ireo asa vitan'ny Direction Générale de Security, departemantan'ny KOM; vao haingana ny media sosialy dia nizara vondrona ara-tsosialy tamin'ny vondrona roa, indrindra ho fankasitrahana sy fanoherana ireo fikambanan'ny heloka bevava nasionaly. [More ...]
Nanomboka ny fampiharana fahazoan-dàlana ho an'ny mpamokatra Tea Tea
Ny tarika Vefa Social Support, niforona teo ambany fandrindrana ny fitantanana sy ny governemantan'ny distrika, dia naneho fahatokisana lehibe tao anatin'ny 53 andro. Vondron'olona tsy mivadika mahatratra 53 5.674.281 isan-tokantrano ao anatin'ny 65 andro, XNUMX taona no miakatra ary ireo manana aretina mitaiza [More ...]
Hividianana ny arina amin'ny alàlan'ny fantsom-bolo any Sandb mandrakizay
Ny vokatra PARAM FAHAMARINANA izay novolavolain'i TURK Elektronik Para dia manafoana ny loza toy ny hosoka sy ny halatra amin'ny fividianana sy ny fivarotana fiara tanana faharoa ary misoroka ny fatiantoka ara-nofo. Rafitra fandoavam-bola haingana sy azo antoka [More ...]
Tamin'ny fanokafana ny lalamby Liverpool sy Manchester tamin'ny Septambra 1830, nanomboka ny serivisy fiaran-dalamby. Talohan'ny noforonina ny fiaran-tsambo, ny ankamaroan'ny fiaran-dalamby dia niasa tamin'ny herin'ny biby ary nampiasaina tamin'ny fitaterana arina sy enta mitovy aminy tamin'ny halavirana. Mifankatia i Liverpool sy Manchester [More ...]
Hicaz Railway Zümred Fiaran-dalamby
Namboarina tamin'ny taona 1909 (Hijri 1327), ity foibe ity dia any amin'ny 20 km atsimo atsinanan'i Sehl El-Matran ary 15 km miala ny toby Sehl El-Matran. Ity serivisy ity dia mitovy amin'ny fisehoan-javatra hafa [More ...]
Androany amin'ny tantara: 15 Mey 1923 Railway any Zurich
Androany tamin'ny Tantara 15 Mey 1891 Nisokatra ny tsipika Lefke-Bilecik (36 km). 125 15 francs no nolaniana isaky ny kilometatra. 1923 Mey XNUMX Nizara vola tany Angletera ny ampahany sasany amin'ny Banky Atsinanana Atsinanana any Zurich. Ity banky ity; [More ...]